Deg Deg: Wasiir Goordhow is casilay -
Deg Deg: Wasiir Goordhow is casilay
Wararka ka imaanaya Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay ayaa sheegaya in uu iscasilay Wasiirka Howlaha Guud Iyo dib u dhiska ee Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Saalax Sheekh Xuseen uu iska casilay xubinimadii Wasiirnimo ee Maamulkaas.
Wasiirka iscasilaya ayaa waxaa uu ucuskuday iscasilaadiisa in uu ku maqan yahay shaqo laguna war galinin jagada loomagacaabay sidaa aawadeed uu iska casilay.
Waakan warsaxaafadeedka wasiirka
Isbadal ayaa dhawaan lagu sameeyay Golihii Wasiirada Dawlad Goboleedka K/Galbeed, wajiyada cusub ee Maamulkaasi lagu soo kordhiyay ayaa magaceyga ka dhex arkay, anigu xilligaan Wadanka waa ka maqan ahay, hawlo Qaran ayaa u joogaa Dalka dibadiisa, dadaal waxtar leh oo Soomaaliya lagu hormarinaayo ayaa ku hawlan ahay.
Mabda’ ahaan waxaa iga go’an inaan mar walba u adeego ummadda Soomaaliyeed, wey mahadsan tahay ciddii aniga oo maqan xilkaasi igu sharaftay, marka aan qiimeeyay marxalada la joogo waxaa ii soo baxday inaan qaban xilka laygu magacaabay ee ah Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Dib u Dhiska Dawlad Goboleedka K/Galbeed sabbabo jira awgood.
Anigoo jecel Qaranimada, Wadajirka iyo Horumarka bulshada Soomaaliyeed ayaa guud ahaan shacbigayga waxan u rajaynayaa Nabad, Guul iyo Barwaaqo.
Eng Saalax Sheikh cusmaan
War saxaafadeedkan ayaa waxaa uu ku shaaciyay barta uu Facebok ku leeyahay Wasiirka
Related Items:Featured, Jubbaland, Mogadishu, President of Somalia
Deegaanka leego oo Haawanaya
Xog ay heshay warbaahinta Tusmotimes oo ku saabsan Dagaal